The 2016 Chinaplas Booth Number nokuda Kingswel Machinery - China Kingswel Machinery
Vadikanwi vatengi uye shamwari,
Kingswel Machinery ari kutora chikamu mune 2016 Chinaplas wakanaka Shanghai. Dumba nhamba ruzivo iri pazasi.
Tinokutendai mose rubatsiro uye kuvimba kuti Kingswel Machinery kwemakore akawanda kudaro. Hatigoni kumirira kuona iwe uri 2016 Chinaplas muShanghai.
In zvakanaka ichi, parutivi ichivhuvhuta chakuvhuvhu muchina uye chakuvhuvhu, asi 3D aidhinda iri zvaisanganisira. nguva ino, isu achaunza mukova pamwero muchina mugoenda pamwero 3D purinda.
Achitarira mberi kukuonai Shanghai.